❤ အချစ်တွေ ခိုင်မြဲစေဖို့အတွက် Ketchup Lip နဲ့ Remover လေး ချစ်သက် လက်ဆောင်ပေးလိုက်နော် 💋 ချစ်သူလေး နှုတ်ခမ်းသားပေါ်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ အချစ်တွေ အမြဲနေရာယူထားဖို့ Ketchup Matte Liquid Lipstick အရောင် (၅) ရောင် ရှိလို့ ချစ်သူလေး သဘောကျမှာပါ။ 🍅 Ketchup Bubble Makeup Cleaning Tissue ကလဲ ဖျက်ရခက်တဲ့ ရေစိုခံ မိတ်ကပ်တွေကိုတောင် အလွယ်တကူ ဖျက်လို့ရတာကြောင့် ချစ်သူလေးရဲ့ အသားအရေလေးကို မပျက်စီးအောင် ဂရုစိုက်ပေးတယ်နော် ကဲ ချစ်သူလေးအတွက် ❤ Valentine Day လက်ဆောင်ဆို Ketchup က အသင့်တော်ဆုံးနော် Ketchup Bubble Makeup Cleaning Tissue 30 Sheets တစ်ထုပ် ၅၀၀၀ ကျပ် Ketchup Bubble Makeup Cleaning Tissue 100 Sheets တစ်ထုပ် ၁၂၀၀၀ ကျပ် Ketchup Matte Liquid Lipstick (3 ml) တစ်ချောင်း - ၈,၅၀၀ ကျပ်
Matte Type ပေမယ့် စိုပြေတဲ့ နှုတ်ခမ်းအသွင် ရရှိစေမယ့် Ketchup Matte Liquid Lipstick ? နှုတ်ခမ်းသားကို ခြောက်သွေ့မနေစေဘဲ သက်သောင့်သက်သာ ရှိစေတဲ့အတွက် တစ်နေကုန် ဆွဲဆောင်မှုရှိစေပါတယ် Chocolate, Pasta, Ketchup, BBQ, Burger ဆိုပြီး အရောင် ၅ ရောင်ရှိပါတယ်။ တစ်ချောင်း ၈၅၀၀ ကျပ် Ketchup Matte Liquid Lipstick??? များသည် မြန်မာနိုင်ငံ FDA မှ စစ်ဆေးခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးဖြစ်သောကြောင့် စိတ်ချယုံကြည်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်
Ketchup Bubble Makeup Cleaning Tissue ရဲ့ Target Trip လဲ August နောက်ဆုံးပါ ✈️ 2020 June လ မှ August လ အတွင်း Bubble Makeup Cleaning Tissue (30 sheets) အထုပ် 7000 နှင့် Bubble Makeup Cleaning Tissue (100 sheets) အထုပ် 3000 ရောင်းချသူတိုင်း Cambodia ခရီးစဉ် သွားရောက်ခွင့်လက်မှတ် တစ်စောင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ခရီးစဉ်လက်မှတ်တွေ အရယူဖို့ ကြိုးစားကြမယ်နော် ??
Ketchup Lipstick No.1 Chocolate လေးနဲ့ သင့်ရဲ့ ချိုမြိန်တဲ့အပြုံးကို မျှဝေလိုက်ပါ …. ??? - အရောင်ထွက်မှန်ကန်တိကျပြီး ကြာရှည်ခံတဲ့ Fomula ဖြင့် ထုတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်။ - Matte Type ဖြစ်ပေမယ့် နှုတ်ခမ်းကို အရမ်းခြောက်သွေ့မနေစေဘဲ သက်သောင့်သာဖြင့် စိုပြေလှပတဲ့ နှုတ်ခမ်းအလှကို ရရှိစေပါတယ်။ - Peppermint ပါဝင်ပြီး ပူရှိန်းမှုဖြင့် သင့်နှုတ်ခမ်းသားကို ပိုမိုကျန်းမာစေပါတယ်။ - Paraben ပါဝင်မှုမရှိလို့ စိတ်ချစွာ လိမ်းခြယ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ချောင်း ၈၅၀၀ ကျပ် ?
Ketchup Lipstick No.3 Ketchup ??? အရောင်ထွက်မှန်ကန်စေရမယ်. နှုတ်ခမ်းသားရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ကာကွယ်ပေးမယ်. ဆိုးပြီးဖျက်လိုက်ချိန်မှာလည်း နှုတ်ခမ်းသား ခြောက်သွေ့ကြမ်းတမ်းမနေစေဘူး. လိမ်းပြီးတာနဲ့ နှုတ်ခမ်းကို Treatment ပေးပြီး အလှပဆုံး အရောင်ထွက်ကို ပေးစွမ်းပါတယ်. တစ်ချောင်း ၈၅၀၀ ကျပ်.